Farmashiyaha Shiinaha dukaanka hore calaamadaha soo saarayaasha iyo alaableyda | Zhengcheng
Magaca badeecada: Farmashiyaha calaamadda hore
Muhiimadda xulashada calaamad wanaagsan
Si kasta oo ay tahay warshaddu, waxa ugu muhiimsan ee lagu gaarayo guusha ganacsiga ayaa ah in macaamiisha la siiyo dareen kalsooni iyo in macaamiisha la dareensiiyo in astaanta lagu kalsoonaan karo. Sidaa darteed, waa muhiim in la qaabeeyo sawirka astaanta. Waxaa jira dhinacyo badan oo lagu qaabeeyo astaanta. Ugu horreyntii, waa aragtida ugu horreysa ee astaanta macaamiisha. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la doorto calaamadda dukaanka wanaagsan. Gaar ahaan horumarka muddada-dheer ee warshadaha dawooyinka, waxaa muhiim ah in la abuuro dareen kalsooni ka dhexjirta macaamiisha.
1. Farmashiyadu waa inay lahaadaan calaamado dukaanno u gaar ah oo gaar ah si ay dadka kale uga dhigaan kuwo joogto ah oo dadka siiyaan kalsooni. Shaqada ugu weyn ee calaamadeynta farmasiyada silsiladda ayaa ah in la muujiyo midnimada iyo madaxbannaanida noocyada silsiladda, in la sameeyo muuqaal sumadeed, la ballaariyo saamaynta sumadda, waana mid aad u muhiim ah in laga sooco noocyada kale, sidaas darteed calaamaddu waxay noqoneysaa mid aad muhiim u ah.
2. Saxiixa farmasigu waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, nadiif ah oo fudud, kaas oo matalaya sawirka farmasiga. Wejiga nadiifka ah wuxuu dadka ka dhigi doonaa inay dareemaan in daawooyinka iyo wax soo saarka caafimaadka ee kala duwan ee farmashiyaha ay noqon doonaan kuwo tayo fiican leh oo lagu kalsoonaan karo, dadkuna waxay diyaar u yihiin inay aaminaan tayada dukaankan. Haddii calaamadaha farmasigu wasakh yihiin oo naqshaduna qurxoon tahay, dadku miyaanay shaki ka qabin sugnaanta dawada ay hesho?
1. Alaabta ceyriinka ah ee loo adeegsaday calaamadda Zhengcheng waa xaashida loo yaqaan 'Mitsubishi acrylic sheet', oo leh dusha sare, midab buuxda, iyo gudbinta iftiinka wanaagsan. Badeecadaha la soo saaray waxay leeyihiin maqaar buuxiya shuruudaha astaanta waxayna muujin karaan qiimaha sumadda. Taas bedelkeeda, qaar ka mid ah alaabada la midka ah ee warshadaha waxay isticmaalaan alaabta ceeriin ee liidata, calaamadaha la soo saarayna waxay yareeyeen qiimaha sumadda.
2. Shirkadeenu waxay ku qalabeysan tahay warshad leh qalab wax soo saar xirfadeed sida mashiinka finanka faakiyuumka, mashiinka jarista iwm. Naqshadeynta astaanta calaamadaha silsiladaha silsiladaha qaarkood waa mid dhib badan, laakiin qalabka warshaddeenna ayaa xallin kara dhibaatadan oo keliya waxayna hubin karaan saameynta isticmaalka iyo bilicsanaanta astaamaha.
3. Fadlan ha ka welwelin saameynta rakibidda calaamadda ka dib markaad hesho alaabada. Sababtoo ah nashqadeeyaasheena ayaa naqshadeyn doona calaamadaha iyada oo loo eegayo cabbirka dukaankaaga, ka dibna kuu soo diraya sawir gacmeedka. Ka dib markaad ku qanacdo, warshaddeenu waxay bilaabi doontaa samaynta calaamadaha iyadoo loo eegayo calaamadaha la go'aamiyay.
Hore: U iibso calaamadda hore silsiladda cuntada degdegga ah
Xiga: Calaamadda sanduuqa nalka xayeysiinta
Saxeex Farmashiyaha 3d
Saxeex Albaabka Farmasiga
Gudiga Saxeexa Farmashiyaha
Saxeexa Farmashiyaha 3d
Saxeex Farmashiyaha, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Calaamadaha Xayeysiinta,